ဘောလုံးကိုကြိတ်ဆွန်းရိုးအလေးချိန်: 5-30T သက်ဆိုင်သော device ကို: ဘောလုံးကို Mil, ဘိလပ်မြေစက်ယန္တရားလျှောက်လွှာ: ဘိလပ်မြေ, သတ္တုဗေဒ, ပစ္စည်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများစိတ်ကြိုက်: ဟုတ်ကဲ့နိဒါန်း Hollow ရိုးဘောလုံးကိုကြိတ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ function ကိုဘောလုံးကိုကြိတ် shell ကို၏ rotary ဆောင်သောဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်း, ဆွန်းရိုးအလင်းဆုံ tile ကိုနှင့် shell ကိုချိတ်ဆက်မှုမြို့ပတ်ရထားကို arc လည်ပင်း၏လည်ပင်းပေါ်တွင်းနှင့်သဲတွင်းကိုအောက်တွင်ရှိသည်မဟုတ်သငျ့သညျ။ ထုတ်လုပ်သည့်အခါ, အလင်းဆုံ tile ကိုစက္ကရန်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစက်အပြီးကြိတ်လိုအပ်ပါတယ် ...
သက်ဆိုင် device ကို: ဘောလုံးကို Mil, ဘိလပ်မြေစက်ယန္တရား
လျှောက်လွှာ: ဘိလပ်မြေ, သတ္တုဗေဒ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းနှင့်အခြားသူများ
ဆွန်းရိုးဘောလုံးကိုကြိတ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ function ကိုဘောလုံးကိုကြိတ် shell ကို၏ rotary ဆောင်သောဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်း, ဆွန်းရိုးအလင်းဆုံ tile ကိုနှင့် shell ကိုချိတ်ဆက်မှုမြို့ပတ်ရထားကို arc လည်ပင်း၏လည်ပင်းပေါ်တွင်းနှင့်သဲတွင်းကိုအောက်တွင်ရှိသည်မဟုတ်သငျ့သညျ။ ထုတ်လုပ်သည့်အခါ, အလင်းဆုံ tile ကိုတိကျစွာချောမွေ့ finish ကိုလုံခြုံရန်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစက်အပြီးကြိတ်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီနည်းပညာ ချ. အလွန်မြင့်မားသောစံလိုအပ်သည်။ နှင့်ရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု CO ။ , LTD မှအရည်အသွေးမြင့်ဆွန်းရိုးထုတ်လုပ်နိုင်သူ foundries တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Ball ကိုကြိတ်ဆွန်းရိုးတံများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပစ္စည်းအောက်ပါဆင်တူသည်:
Cast ကိုသံမဏိ ZG230-450 များအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း BS 3146-1 CLA1Gr.B
ယူအက်စ်အေ AISI / SAE UNS J03003
ဂျာမနီ 1681 Din GS-52
ဂျပန် JIS ဘီ-G5101 SC410
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ISO3755 230-450
1. ရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု CO ။ , LTD မှထူးခြားသောအပူကုသမှုနည်းပညာသက်ဆိုင်, ဆွန်းရိုးတံ၏ခိုင်မာသောနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခုခံတိုးတက်ခဲ့သည်။
2. ရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု CO ။ , LTD မှဆွန်းရိုးထုတ်လုပ်ရန်မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိအသုံးပြုသည်။ သတ္တုများပုံသွန်း၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်, ရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု CO အတွက်။ , LTD မှအင်ဂျင်နီယာများကဘောလုံးကိုကြိတ်၏စစ်ဆင်ရေး features တွေအဆိုအရဆွန်းရိုးတံရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံမှာ optimized ။ ဤသည်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်အကြီးအကျယ်ရှည်လျားအချိန်ပြေးအောက်မှာဆွန်းရိုးတံရဲ့တည်ငြိမ်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်ဘဝလုံလုံခြုံခြုံ။
3. ရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု CO ။ , LTD မှသံမဏိ Cast ၏ခိုင်ခံ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖောဖောသီသီတိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းဆွန်းရိုးတံနဲ့တူအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်နိုင်ကြသည်။
ယခင်: ဘောလုံးကိုစက်အဆုံးဖုံး, စာရေးကိရိယာများဝင်ပေါက်များနှင့်စက်ရုံပြင်ပ